SARIPIKA: Olona Mihoatra Ny 70.000 No Nafindra Toerana Noho Ny Fifandonana Teo Amin’ny Miaramila Filipina Sy Ny Vondrona Ahiana Ho Tohanan’ny ISIS · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Jona 2017 14:33 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Türkçe, Français, Español, Italiano, عربي, Ελληνικά, English
Mikendry ny vondrona ao amin'ny Maute ny lalàna miaramila, kanefa nahatonga famindran-toerana faobe ho an'ny mponina Marawi ho any amin'ny tanàndehibe manodidina izany. Nandositra ny tranony ny fianakaviana an'arivony mba tsy ho tratran'ny fifampitifirana .
Tamin'ny marainan'ny 30 May 2017, nilaza ny governemanta fa hiantraika amin'ny fianakaviana miisa 14.313 na olona miisa 71.115 ny ady mitam-piadiana ao Marawi. Nilaza ny governemanta fa misokatra ny foibe fialofana miisa 20 ho an'ny fianakaviana miisa 2.261 na olona miisa 10.809. Olona an'arivony no nandeha nitady fialofana tany an-tanàndehibe hafa noho ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa. Hita nandeha an-tongotra nitondra ny enta-keliny ny olona sasany.